अमेरिका टेक्ने भिसा, तपाईलाई पक्का ! | Weblog.com.np
अमेरिका टेक्ने भिसा, तपाईलाई पक्का !
सुबिन श्रेष्ठ । शहरिया भिडभाड र सडकका छेउछाउमा यतिखेर बेग्लै रमिता छाएको छ । आँखा झिल्मिलाउने रंगीन चमकका दृश्यहरु पनि । व्यक्ति विशेषलाई नभनेर सम्पूर्ण जनतालाई आकर्षित पर्ने दाउमा प्रतिस्पर्धा मच्चिएको छ । थरि थरिका कपडामा बडा बडेमान अक्षरमा अमेरिका जाने हो ले तानिरहेको हुन्छ । आखिर अमेरिका लाने यत्रो होडबाजी चलेको बेला तपाई किन चुपचाप !
देशको हालत यस्तै छ । बेरोजगारीताको ज्वरो देशलाई हनहनी बढ्या बढ्यै छ । एउटा यहि हो उपाय अध्यारोमा तीर हान्ने लागे भाग्यको कुरो नलागे कसको के नै जान्छ र विगत यस्तै अमेरिका पुग्ने सपनामा सयौ नेपालीहरु लोभिएका थिए । जसमध्ये आधा भन्दा बढी संख्याले सपना साकार गर्न पायो । यो साल पुन फर्कियो उस्तै अमेरिकाको सपना बोकेर यसपालीको भीड व्यापक छ । मल्याङ्कन र गन्ती गर्ने नी गाह्रो । क्या गजब आफ्नो भन्दा अर्काको देश प्यारे । देशका लाखौं जनतालाई अमेरिका जान हतारे। अझ हिजोआज एक नेपालीले संझौता गर्न सक्ने सस्तो र सुलभ दरमा नजिकै स्थानहरुमा उपलब्ध भइरहेकै छ । अमेरिकी सपना सस्तोमा । त्यो पनि मात्र सय रुपैयामा । हो त । देशमा यत्रो महंगी छ । हर बस्तुभावहरुको मुल्य आकासिएको पीडा सम्पूर्ण जनताहरुले भोगीरहेका छन् ।
तसर्थ जाबो सय रुपैयामा के आउँछ एक लिटर मट्टितेल नी आउन्न । यहाँ बसेर केहि साध्य लाग्दैन । यस्तै सोचमा हो । सय रुपैयाले अमेरीका जान पाइन्छ भने किन नजाने त्यता काम पनि पाइन्छ रे । मासिक तलब डलरमा आहा यस्तो चानस कसले व्यर्थै फाल्छ र हजारौ नेपालीको मनमा यस्तो सपनाहरु खेलीरहेका छन् । शहर र सडकहरु रंगिन देखिएका छन । विर्खे भेला र हरि शहरा अमेरिका जाने फर्म भर्ने मौका गुमाएनन् । अझ अमेरिका जाने निम्तो फर्ममा उपयुक्त तस्वीर अत्यावश्यक भएकोले फोटो खिच्दाको बखत हरिले आफ्नो ख्याउटे अनुहार गजबले फुलाएको दृश्य कम रमाइलो थिएन । अमेरिका पुग्ने प्रथम नेपाली उ नै होला जस्तो । अमेरिका मोहले सबलाई यस्तै गरि धपक छोएको देख्न सकिन्छ ।
देशका बेरोजगारी भीड हौसिएका छन् । देशमा अशान्ति बृद्धि र बाँच्ने आधारको साँचो हराएकोले अमेरिका पुग्ने सपना लिएका हुनसक्छ । अमेरिका जाने सपना पचाँस रुपैयामा धमाधम बिकि्र वितरण भइ भइरहेको समयमा एउटा समस्या देखिएको छ । यसपाली को कति सय नेपालीहरु अमेरिका पुग्छ किटान गर्न सक्दिन । तर गत सालमा सपना साकार भइसकेका नेपालीहरु भने अमेरिका टेक्न पाएका छैनन् ।
छापामा यसले थप चर्चा र अमेरिका गन्तव्यको सपना लिएका भिडहरुलाई चिन्चित तुल्याएको छ । तापनि अमेरिका जाने सपनामा कसिएकाहरुको हुलमुल घटेको छैन । अमेरिकाको ज्वरेाले मध्यमवर्ग धनाढ्य तथा सम्पूर्णलाई समाएको छ । यस्तो सय सय रुपैयामा अमेरिका जाने अवसर फेरि आउला वा नआउला । ढिला नगर्नुस् । बेलैमा ध्यान दिनुस् । यस्तो मौका अब केही दिन सम्म छ । सय रुपैयाको मुख नहेर्नुस् । बुझ्नु भएन सय रुपैयाले तपाइलाई अमेरिका पुर् याउनेछ । तर एउटा निराशजन्य खबर पनि ब्यापक छाएको छ ।
यस कारण की अमेरिका जाने सपना साकार हुनसक्छ । यद्यपी अमेरिका टेक्ने संभावना ज्यादै न्युन छ । अमेरिका पठाउने सेतो घरले दावी गरेको छ की रोजगारीको अनुभव नहुनेलाई अमेरिका टेक्न नदिने जनाएको छ । जबकी यसपाली अमेरिका जाने दाउमा सयौं बेरोजगारहरु हतारिएका छन । प्रयासरत छन् । अमेरिका पुग्ने सपनाको ढोका खोलिहाल्यो भनेपनि अनुभवहीन भएको कारण देखाएर यहि देशमा रहनुपर्ने बाध्यता नहोला भन्न सकिन्न । जे भएपनि निराश नबन्नुहोला । सिप सिक्नुस् । अध्यारोमा ताक्नुस् । परेछ भने यसपालिको एक थान अमेरिका टेक्ने भिसा…………… तपाईलाई पक्का ! आगे…यहाँहरुको मर्जी ।
Subin Shrestha has written7articles on Weblog.com.np.
An editor and photo journalist
Visit this author's website · View more posts by Subin Shrestha
No responses to "अमेरिका टेक्ने भिसा, तपाईलाई पक्का !"